MACLUUMAADKA TARANKA EE GOLDEN PEI DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka ee Golden Pei Dog iyo Sawirro
Shiine Shar-Pei / Dahab dahab ah oo ey isku dhafan
Jaxon the Shiine Shar-Pei / Dahab dahab ah qas eyda markay jiraan 7 bilood
Pei Dahabka ahi maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Shiine Shar-Pei iyo Dahab dahab ah . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Jaxon the Shiine Shar-Pei / Dahab dahab ah isku qas eey markay tahay 11 toddobaad
'Trixie waa haween, 2½-bilood jirta Shar-Pei / Retriever. Waxaan iyada la joognay laba maalmood oo keliya oo si saraaxad leh uma qiyaasi karno nolosha ka hor intaysan imaan.
Waxay ka timid beero-yaqaan maxalli ah oo ku taal aagga Chicago waxayna ka timaaddaa khadadka dhiigga ee saafiga ah ee labada dhinac ee isirkeeda. Sida aad sawirka ku aragtaan, Shar-Pei ayaa iyada ku badan.
Dabeecaddeeda ayaa heer sare ah. Waxay iska dhigtay xubin ka tirsan qoyska oo lagu raaxeysto daqiiqado gudahood markay timid. Waxay umuuqataa inay durbadiiba jajaban tahay guriga maxaa yeelay waxay nala soo socodsiin doontaa markay diyaar u tahay inay baxdo oo aysan wali wax qalad ah ka samayn guriga gudihiisa. Iyadu waa gacaltooyo, kalgacal badan oo caqli badan waxaanan la yaabanahay inay da 'ahaan tahay 2 because bilood oo keliya maxaa yeelay waxay u dhaqantaa sidii iyadoo tababar rasmi ah qaadatay oo ka sii weynaan lahayd.
Waxay raacdaa ciribkeyga xarigna looma baahna socodka . Dhab ahaantii, waxay si cad u sheegtay inaysan jecleyn leyska ayna joojin doonto socodka markaan ku dul dhigo. Markaan iska siibo, iyadu waa ciribtayda. Markaan socdo sidoo kale iyadu, markii aan istaago, iyaduna way socotaa, iyadoon loo eegin waxa hareerahayaga ka socda. Si fudud looma mashquulin karo waana sahlan tahay in dareenkeeda la ilaaliyo. Kama cabsaneyso aragtiyaha iyo dhawaqa cusub ee adduunkeeda cusub waxayna si cad u sheegtay inay ku talajirto inay ku ciyaarto mitir laba jibbaaran oo dhulkeenna ½-acre ah.
'Waxay horeyba u laheyd toy ay jeceshahay' binkie 'waxayna jeceshahay markaad isku daydo inaad ka qaadato. Markay kaa kaa kaxayso waxay iskaga timaaddaa si xarrago leh sidii inay tahay boqorad guuleysata oo guuleysanaysa 'WOOF' si ay barta guriga ugu kaxeyso.
'Sawirka kore waxaad ku arkeysaa inay iyadu leedahay mowqif boqortooyo socodkeeduna uu yahay kan lagu riixo eeyo badan oo show ah. Way socotaa oo waxay istaagtaa iyada oo isku kalsoon.
'Xaqiiqda ah inay tahay eey cute ah oo sidan u qurux badan iyo jaakadeeda dhalaalaya iyo gunta dufanka ayaa ka dhigaya mid aad u jecel. Markay jiifsato jowlaheeda flop oo ay kor kaa eegto, kaliya waxaad dooneysaa inaad ilmo ka dhacdo oo aadan caawin karin laakiin aad awwwww tagtid!
'Wali maanaan arag sifooyin xunxun, waxay nala joogtay waqti aad u yar, laakiin waxay leedahay astaamo badan oo wanaagsan oo labada nooc ah waana sii wadaynaa xoojinta kuwa hadii kuwa xun xun soo muuqdaanna waxaan ku xoori doonnaa biqilka. . Wixii aan arkay ee lagu sharraxay labada nooc, eeygan ayaa leh kan ugu fiican labadaba cirbadaha.
Waxaan rajeynayaa inaan safarka ku qaato xubinta ugu cusub qoyskeena.
Trixie dheddigga Shar-Pei / Golden Retriever mix puppy (Golden Pei) at 2 1/2 bilood jir
xadka muqisho eey xoolo collie
iskudhaf dachshund iyo chihuahua
somali setter xuduuda collie mix
1 sano jir sternard
isku darka bulldog ingiriisiga la chihuahua